Tetik'asa tsara indrindra amin'ny 24 Lotus Tattoos ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-borona
Tetikasa tsara indrindra 24 Lotus Tattoos ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Aogositra 27, 2016
Misy karazana tatoazy samihafa izay nampiasaina ho voninkazo lotus. Ny hakanton'ity tatoazy ity dia nahatonga olona maro ho amin'izany. Voasarika hisambotra ny masony izany. Rehefa mahita olona misoritsoritra ao amin'ny vatany ianao dia liana hahafantatra izany hiresahana izany.
Lotus tattoo midika
Ireo totozy lotus dia mety ho sarotra ary nahatonga azy ireo hahatalanjona tena mahatalanjona ny tatoazy misy dikany. Ny loko amin'ny tatoazy dia manome ny dikany #lotus isan-karazany. White lotus dia miresaka momba ny saina sy ny ara-panahy. Miresaka momba ny fahalavorariana sy ny fahadiovana ihany koa izy.
Ny lotus manga dia maneho ny fanaraha-maso ny ara-panahy amin'ny ara-batana. Mampiseho fahendrena, faharanitan-tsaina ary fahalalana izany. Ny loto volomparasy dia maneho ny fomba fijery mystika momba ny fivavahana. Ny lotus mena dia miresaka momba an'i Bouddha raha ny loto mena dia miresaka momba ny fo, ny fangorahana ary ny fitiavan-tanindrazana toy ny fitiavana.
Misy karazana tatoazy maro azonao ampiasaina amin'ny fanovana ny fomba fijerinao. Raiso, ohatra, ny volony izay tonga amin'ny endriny samihafa. Tsy misy ampahany amin'ny vatana izay tsy mifanentana amin'ny. Inona no dikan'ny tatoavin'ny volombava? Maro ny olona manana heviny samihafa. Ny lotus #tattoo dia tandindona izay antony mahatonga ny olona handeha ho azy ireo indrindra indrindra ireo mpivavaka izay mahita dikany maro ho an'ity tatoazy mahafinaritra ity. Azo atao ny manintona ny trondro koi mba hahatonga azy hanana dikany hafa mahagaga ny fitiavana, ny fahombiazana, ny vintana tsara, ny fahaiza-misakana ny vato misakana ary ny loza koa.
Miaraka amin'ny famoronana ny penina elektrika, ny famerenana sary dia nanjary mora tsotra izao ary ny maro dia maro no mandeha ho an'io tatoazy voninkazo lotus io. Ireo mpanao asa tanana, izay nangataka be dia be, dia voafetra ho ireo olona misoratra anarana izay nipetraka tany amin'ny faritra lonaka. amin'ny alalan'ny
Na ahoana na ahoana, rehefa afaka fotoana fohy, ny famolahana ny fingotra indray ny vatany dia nandroso indray manerana izao tontolo izao, ary azo arovana ny manambara fa ankehitriny, 4 avy amin'ny 10 olona manana karazana ranomainty ao amin'ny vatany. amin'ny alalan'ny
Io asa tanana io dia nandroso haingana toy izany, ka ny olona dia tsy nametraka ny endriny maharitra amin'ny endriky ny endriky ny asam-pamokarana tsy misy fitaka noforonina izay tena nanokatra ny làlana ho an'ny olona izay tsy te-hiditra amin'ny fotoana rehetra. amin'ny alalan'ny
Back Lotus Flower tatoazy
Hatramin'io fotoana io, ny fahamendrehan'ireo tononkalo ireo dia nahavariana fa nesorina ary tsy isalasalàna fa hanao toy izany mandritra ny fotoana maharitra. amin'ny alalan'ny
Ny olona dia mahazo tattoos noho ny antony samihafa. Misy ireo olona izay mandeha amin'ny tattoos miharihary be mba hamoronana fahatsapana na hotapahana ny maha-izy azy sy ny karazany. amin'ny alalan'ny
Leg Tattoo Flower
Arakaraky ny fisintonana ianao no anisan'ireo izay mahazo ny tatoazy noho ny antony manokana na ho an'ny olona tsy manam-paharoa fotsiny, dia mila mijery toerana maranitra ianao hanompoana ny filànao. amin'ny alalan'ny
Ilaina ihany koa ny ilaina mba hisafidianana fialokalofana amin'ny fotoana tsy voafetra fa tsy maintsy esorinao lavitra ny maso amin'ny ankapobeny amin'ny fotoana voatondro. amin'ny alalan'ny
Soa ihany fa misy karazana toe-javatra marobe izay mahatonga izany ho azo atao hahazoana tombony mahasoa, kanefa tehirizo toy ny faniriana izany. amin'ny alalan'ny
Loto totozy lotus
Izany dia anisan'ireo faritra malaza indrindra ary mampiseho toerana mahagaga ho an'ny tatoazy sy teny kely. Azonao atao tsy an-kijanona ny hitazona azy amin'ny kofehin-jiro na fikarakarana ary efa vonona ianao. amin'ny alalan'ny
Lego voninkazo an-tanety
Anisan'ny faritra faran'izay mampihorohoro ny tatoazy ary afaka mieritreritra azy tahaka ny amin'ny fotoana izay ilainao ny mihazona ny halaviran-dalana ara-strategika avy amin'ny fampijaliana dia manana fotoana tsotra manafina ny tatoazy. amin'ny alalan'ny
Lovely Lovo voninkazo ho an'ny vehivavy
Ny fananana tatoazy toy ity dia izay afaka manome anao ny fitaovana ilainao hampisy fahasamihafana amin'ny fomba anao. Maro ireo olona izay misaina foana ny fomba fijery tsy manam-paharoa amin'ny tatoazy. loharanon-tsary
Ny fomba tsotra indrindra dia ny manavaka amin'ny tatoazy iray dia ny manana iray izay tsara tarehy toy ity. Azonao atao ihany ny mahazo izany raha mahatakatra ny dikan'ny hoe manana tatoazy miavaka ianao izay miresaka mihoatra noho izay azonao atao amin'ny vahoaka. loharanon-tsary
Back Lotus voninkazo tato
Ny vidin'ny fananganana tatoazy dia tsy lafo be raha tsy mieritreritra zavatra momba ny fitsipika ianao. Miaraka amin'ny #design tahaka izao, tsy handany vola be ianao. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny hahazo mpilalao mahay ary vita ny asa. loharanon-tsary
Legato voninkazo voninkazo
Inona no zavatra voalohany tokony hataonao alohan'ny hahazoanao tatoazy voninkazo lotus? Tokony ho fantatrao ny karazana tatoazy ilainao ary avy eo dia tokony ho azonao izay tato an-tsehatra. loharanon-tsary
Miverina amin'ny tatoazy voninkazo lotus
Rehefa vita izany dia tokony hitady mpikaroka iray izay hanampy anao hanatratra izany endrika zavakanto izany. loharanon-tsary
Lovato totozy lotus
Maro ireo toerana ahafahanao mahazo fanampiana rehefa mifidy mpanakanto tatoazy. Ny habaka aterineto dia manana tranonkala maro izay miompana amin'ny karazana tatoazy samihafa. loharanon-tsary
Lotus voninkazo ho an'ny vehivavy
Totozy marevaka marevaka
Rehefa afaka mamaky amin'ny alalan'ireo tranonkala ireo ianao ary mametraka fanontaniana mafonja momba ny tatoazy iray manokana, dia ho mora kokoa aminao ny hahazo ny loto voninkazo loto. loharanon-tsary
Aza adino fa ny tatoazy tsirairay dia manana hafatra manokana izay manandrana mandalo. Rehefa vonona ny handefitra tatoazy ianao, dia makà fotoana mba hahatakarana izay tadiavinao handalo na hitazona ny vatanao ho marika. loharanon-tsary
Sexy tatoo voninkazo lotus
Ho an'ny tatoazy sasany toy ny olona maharitra, tokony hitandrina ianao alohan'ny hahalasanao vola be manandrana manala izany. loharanon-tsary
Loto totozy ny tazo
Tsindrio eto raha te hahita hevitra totozy momba ny Tattoo Lotus Flower ho an'ny ankizivavy
namana tattoos tsara indrindraraozy tatoazydiamondra tattootattoo ideasmoon tattoosloto voninkazoeagle tattooscompass tattootattoo cherry blossomTattoo Feathertattoos voronascorpion tattootattoo eyetatoazy ho an'ny zazavavyelefanta tatoazyTatoazy ara-jeometrikatanana tatoazyrip tattoostattoosfitiavana tatoazyHeart Tattoostattoo octopusAnkle Tattoostattoos backkoi fish tattoomasoandro tatoazytratra tatoazytattoos sleevelion tattoostatoazy lolotato ho an'ny vatofantsikatattoos footmehndi designhenna tattootattoos armtattoostattoos mahafatifatytattoo watercolortattoo infinitymozika tatoazytattoos crosstattoos rahavavycat tattoostattoos ho an'ny lehilahytattoos mpivadytatoazy voninkazoarrow tattooanjely tattoostatoazy fokoNy zodiaka dia mampiseho tatoazy